Go'aamada shirkii mucaaridka Somaliland - BBC Somali
Go'aamada shirkii mucaaridka Somaliland
Image caption Axsaabta ka dhisan Somaliland iyo xukuumada oo heshiis gaaray sanadkan
Shirkan oo lagu tilmaamay shirka wada tashiga iyo qiimeynta xaaladda guud ee Somaliland ayaa waxaa war-murtiyeedka ka soo baxay maanta oo ay ku wada saxeexanyihiin labada gudoomiye ee labada xisbi mucaarid ee UCID iyo WADDANI, Feysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ka mid ah go’aamada: in Madaxweynuhu uu fuliyo heshiiskii 26 May 2015, ee saddexda xisbi iyo xukuumadu ka gaadheen doorashada.
Waxay kaloo sheegeen mucaaridku inay go’aansadeen in aanay aqbali doonin wax aan ahayn waqtigii saddexda xisbi iyo xukuumadu isla qaateen ee ahaa in doorashada la qabto Diseembar 2016.
Sida ku qoran qoraalka labada xisbi haddii madaxweynuhu uu fulin waayo heshiiskii saddexda xisbi ee Kulmiye, Waddani iyo Ucid, waxaa caddaan ah in aanu madaxweynuhu diyaar u ahayn inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi.
Waxaana lagama maarmaan noqoneysa ayay yidhaahdeen Ucid iyo Waddani in markaasi aannu dalbanno beesha caalamka.
Go’aanka mucaaridka Somaliland soo saareen maanta waxaa kaloo ka mid ah – waa sida hadalka loo dhigaye – in go’aankii guurtida ee muddo kordhintu aanu waafaqsaneyn distoorka iyo sharciga Somaliland.
War-murtiyeedka mucaaridka oo ka danbeeyay shir u socday 23-kii ilaa iyo 26-kii Luulyo ayaa waxaa kaloo ku qoran dhalliilo fara badan oo xukuumadda uga soo jeediyeen dhinacyada garsoorka iyo ku dhaqanka distoorka, dib u dhaca doorashada, dhaqaalaha, amniga, iyo arrimaha dibedda.
Kooxda madasha wada tashiga la baxday oo ah siyaasiyiin magac leh ayaa ku weheliya labada xisbi mucaarid go’aamadan.
Shirkan mucaaridka ayaa hore xukuumaddu isu hortaagtay laakiin waxaa markii danbe u ogolaatay maxkamada distooriga ah ee Somaliland oo ay u ashtakoodeen labada xisbi ee mucaaridka ee Waddani iyo Ucid.